Inona no atao hoe loko simenitra? - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Inona ny loko simenitra?
Inona ny loko simenitra?
2021 / 05 / 29 FisokajianaInterior design 7493 0
Loko simenitra, antsoina koa hoe simenin'ny zavakanto. Nanjary nalaza tamin'ny indostrian'ny famolavolana ho fitaovana haingon-trano ambanivohitra izay mitantara ny dikan'ny famolavolana amin'ny fiteny tsotra sy madio indrindra amin'ny fitaovana. Ny lokon'ny simenitra dia tsotra ary mijery minimalist. Izy io dia kalitao ambonivohitra ambonimbony kokoa raha oharina amin'ny sary sokitra misy embossed sy ny loko latsa-doko feno ravina. Andao hiresaka momba ny inona ny loko simenitra ankehitriny.
Inona no loko simenitra
Mampiavaka ny loko simenitra
Fampiasana loko simenitra
Dingana sy fepetra fitandremana
Ny vidiny sy ny mariky ny loko simenitra
Loko simenitra, karazana firakotra rindrina ambanivohitra. Matetika izy io dia antsoina koa hoe simenitra zavakanto, fa ny anarany hafa dia tsy tokony ho tsy mahazatra anao - beton-drano madio.
Ny fitaovana tian'ilay mpanao mari-trano Japoney Tadao Ando dia beton-drano mazava, fitaovana miaraka amin'ny tolo-kevitry ny wabi-sabi ao anatin'ny minimalism-ny.
Museum Tranombakoky ny kanto izy
Ka ahoana no nahatonga ny loko vita amin'ny beton lasa vokatra mipoaka amin'ny famolavolana anatiny?
Manomboka amin'ny maritrano mankany amin'ny atitany, nanjary malaza ny andiana endrika minimalista, wabi-sabi, ary endrika indostrialy. Ny firafitra tany am-boalohany sy ny endriny tsy manam-paharoa amin'ny beton-dranomasina madio dia nahatonga azy io ho vokatra akoho nendasina. Amin'ny famolavolana anatiny, ny olona ihany koa dia manenjika ny endrika voajanahary amin'ny beton-jiro mazava. Ka, araka ny famaritana malaza ny "loko anatiny = loko" dia nomena anarana hoe "loko simenitra" izy io. Fa ity anarana ity dia toa tsy dia sariaka loatra amin'ny tontolo iainana, ary na somary misy fotony aza. Mbola heveriko fa tsara kokoa ny anarany lehibe "simenitra kanto".
b. Ny maha samy hafa azy amin'ny loko latsa-by
Na dia mitovy amin'ny karazana haingon-trano haingon-trano ihany aza ny loko simenitra sy ny lokon'ny latsa-bato, dia misy fahasamihafana manokana amin'ny fotony. Simenitra ny iray ary loko ny iray.
Ny loko simenitra dia akora voadio avy amin'ny résin, izay misy poti-coarser vitsivitsy, ary ho henjana kokoa ny sosona amboniny raha ampitahaina amin'ny lokon'ny latex. Ny lokon'ny lateks dia manana endrika milamina sy marefo kokoa.
d. Fahasamihafana amin'ny simenitra
Simenitra ny loko simenitra, saingy tsy azo faritana tery ho simenitra. Ahitana simenitra 96% eo ho eo ao amin'ny firafiny, ary ny 4% ambiny dia fangaro. Ny simenitra irery dia tsy afaka mandika ny firafitry ny loko amin'ny simenitra ary tsy azo ampiasaina amin'ny fananganana rindrina. Afaka milatsaka mora foana izy ary mampiakatra vovoka, ary simenitra kanto ihany no afaka mamorona izany firafitra voajanahary izany.
Endri-javatra ny loko simenitra
a. Fampiharana marobe
Ny loko simenitra dia be mpampiasa amin'ny haingon-trano sy amin'ny haingon-trano ho an'ny besinimaro. Tsy mitovy amin'ny loko vita amin'ny tara-pahazavana taloha izy io, ary mihamaro ny mpanjifa sy ny mpamorona misafidy ny handravaka ny habaka amin'ny loko simenitra, izay mampiseho tanteraka fa ny kolontsaina haingon-trano dia toa ekolojika sy tsotra, miaraka amin'ny fanamafisana bebe kokoa ny firavaka kanto any ambanivohitra.
b. Haingo matanjaka sy fomba miavaka
Ny lokon'ny simenitra dia manana endrika simenitra tsy manam-paharoa, izay mety amin'ny endrika minimalista malaza, wabi-sabi ary indostrialy ankehitriny. Izy io dia manana endrika miavaka ary ny haingon-tsoratry ny haingon-trano manokana raha oharina amin'ny fitaovana haingon-trano hafa.
d. Fiarovana ny tontolo iainana, fanoherana ny rano ary fanoherana ny tasy
Ny loko simenitra dia manana firafitra tsotra, noho izany dia maitso, miorina amin'ny rano ary tsy misy loto. Ny primer dia manana ny anjara asan'ny fisorohana ny rindrina tsy ho vaky, mandatsaka chalking ary mandatsaka lavenona. Ny palitao ambony dia afafy mba hahatratrarana ny fanoherana ny fikosoham-bolo, ny hamandoana ary ny fanoherana ny ahitra. Mety tsara raha ampiasaina amin'ny famolavolana anatiny.
Ny loko simenitra dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny famolavolana trano. Ny rindrin'ny trano Inoue dia rakotra loko simenitra avokoa, mamorona fahatsapana indostrialy maoderina miaraka amina fomba miavaka.
Tsy ny fomba indostrialy ihany no tia loko simenitra, fa ny fomba wabi-sabi koa dia mirindra tsara amin'ny loko simenitra. Ny hazo malazo dia ampifanarahana amin'ny endrik'ilay loko simenitra tany am-boalohany, izay lalao mifanentana.
b. Haingo ho an'ny daholobe
Ny firafitra voajanahary aseho amin'ny loko simenitra dia mety tsara amin'ny toerana malalaka. Ny fahatsapana ambanivohitra sy marefo mikoriana avy amin'ny fitaovana dia mety hahatonga ny habaka iray manontolo haneho hatsaran-tarehy tsotra sy kanto. Ny vidin'ny loko simenitra dia antonony ary ny fizotry ny fananganana dia tsotra sy haingana, noho izany dia fomba haingana sy mahomby amin'ny tetikasa haingon-trano ampahibemaso sasany.
a. Dingana fananganana
Ny fanamboarana ny loko simenitra dia tsotra ihany, manomboka amin'ny fitsaboana fototra ka hatrany amin'ny sosona putty ka hatrany amin'ny dingana fanorenan'ny loko simenitra. Voalohany, mihodinkodina ny primer mpanisy tombo-kase alkali isika, faharoa, manosotra ny lokon'ny simenitra isika, ary farany, manakodia / manaparitaka ny palitao ambony isika ary mamita!
Misy karazany roa ny fomba fanamboarana loko amin'ny simenitra, izay mila hazavaina: ny iray fanesorana fisaka, ary ny iray fanesorana ny andiany. Misy karazany roa ihany koa ny fikosehana: ny iray fanesorana ny trowel ary ny iray fanesorana antsy batch. Hafa ny vokatra vokarin'ny fizotran'ny fananganana tsirairay, noho izany mila misafidy tsara ianao.
▲ Ny vokatry ny fikikisana fisaka dia endrika voajanahary lava, ary tsotra ny fananganana.
▲ Miharihary sy miavaka kokoa ny firafitra, ary sarotra kokoa ny fizotran'ny fananganana, izay mitaky fahaizana avo indrindra amin'ny talen'ny mpiasa.
Mba hampifandanjana ny vokatra sy ny hafainganam-pandehan'ny fanamboarana dia nitarina ny fomba fanamboarana ny fikosohan-tsakafo. Ny fomba toy izany dia somary ambany ihany koa amin'ny vidin'ny asa.
Ny fepetra voalohany amin'ny fanamboarana loko simenitra dia ny safidin'ny loko sy ny endriny. Amin'ny ankapobeny, ny mpanamboatra dia hanome sakana loko na santionan-javatra kely hanandramana faritra kely aloha, ary avy eo misafidy ny fomba fampiasana ilay manokana.
Ny teboka iray hafa dia ny fitandremana ny asa fanamboarana. Ny ambaratongam-mottling eo amin'ny rindrina dia mifandraika amin'ny famaranana, vao mainka tonga haingana ny famaranana dia miharihary kokoa ny fiantraikan'ny mottling. Ary arak'ireo fitaovana fanosehana samihafa, teknika, fanaraha-maso ny fahasamihafana eo amin'ny fotoana, sns., Dia mety hisy vokany tsy misy dikany ihany koa.
Ny vidin'ny loko vita amin'ny simenitra dia manomboka amin'ny 10 yuan / metatra toradroa ka hatramin'ny 200 yuan / metatra toradroa. Ny vidin'ny fananganana dia mila vidiana arakaraka ny tahan'ny solika ao an-toerana. Amin'ny ankapobeny, ny tompon-trano fananganana tany diatomaly dia afaka mahay manamboatra loko simenitra.
Toro-marika marika simenitra
Jane fotaka, Simu, oikos, mitsingevana Fei Nei, lambam-baravaran'ny rivotra Kai
Ny tabilao manaraka dia mamintina: inona ny loko simenitra?
Previous :: Loko simenitra, andalana plastika, marbra, vera, fandikana maro amin'ny fomba maoderina! Next: Inona ny jiro manintona andriamby?